Madaxweynaha Eritrea oo booqasho 3 maalmood uga bilaabatay dalka Sudan - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Eritrea oo booqasho 3 maalmood uga bilaabatay dalka Sudan
Madaxweynaha Eritrea oo booqasho 3 maalmood uga bilaabatay dalka Sudan
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa gaaray magaalada Khartoum ee dalka Sudan, halkaasoo ay uga bilaabatay booqasho saddex maalmood ah, kaddib markii uu martiqaad rasmi ah uu ka helay Madaxweynaha Golaha Sare ee dalka Sudan Gen. Abdelfatah Burhan.
Booqashadan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo Gobolka ay hareysay siyaasado is diidan, waxaana la saadaalinayaa in markii u horeysay dalalka Gobolka ku kala qeybsamaan dano kala duwan, waxaana arrintan soo baxday markii dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea oo isbaheysi ah ay u kala codeeyeen dalalka Kenya iyo Jabuuti Tartankii Kursiga aan joogtada aheyn ee Golaha Ammaanka QM oo ay Kenya ku guuleysatay.
Madaxweyne Isaias ayaa waxaa wafdigiisa ka mid ah La Taliyihiisa rug-cadaaga ah Yemane Gebreab iyo Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda Cusmaan Saalax, waxaana wada hadalo la leeyihiin Madaxweynaha Golaha Sare ee dalka Sudan Gen. Abdelfatah.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlaya sidii ay diiradda u saari lahaayeen xoojinta xiriirka labo geesoodka ah iyo adkeynta dadaalada socda, sida iskaashiga gobolka iyo is dhex galka.
Booqashada Isaias Afwerk ee Sudan oo saaxib dhow la ah Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa ku soo aaday xilli dalalka Sudan, Itoobiya iyo Masar ay u dhaxeyso xiisad ka dhalatay biyo xireenka ay Itoobiya ka dhisatay Wabiga Nile oo ay dooneyso inay dhowaan daah-furto, halka dalalka Masar iyo Sudan ka biya diidan yihiin oo ay ka cabsi qabaan inay biyo yaraan ku dhacdo, haddii Itoobiya ay daaha ka furto biyo xireenkeeda.
Masar iyo Eritrea ayaa xiriir dhow u dhaxeeya waxaa muddo sanado ah jiray hadal heyn ku saabsan in Eritrea damacsan tahay inay saldhig Milateri siiso Masaarida, waxaana Madaxweyne Isaias uu booqasho labo cisho qaadatay ku tagay dalka Masar bishii June 2019.